🥇 ▷ Samsung waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala iPhone inay tijaabiyaan Galaxy-ga 30 maalmood ✅
Samsung waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala iPhone inay tijaabiyaan Galaxy-ga 30 maalmood
Samsung waxay ku casuumaysaa dadka isticmaala Apple inay tijaabiyaan mobiladooda
Shirkadda Koonfurta Kuuriya Samsung ayaa kalsooni badan ku qabta aaladeeda cusub, illaa heer ay hadda billaabatay olole loogu talagalay dadka isticmaala Apple waxay isku dayi karaan 30 maalmood mid ka mid ah moodooyinka Samsung cusub Galaxy S6 Edge +, Galaxy Note 5 iyo Galaxy S6 Edge
Si loo helo habka tijaabadan, Isticmaalayaasha iPhone-ka waa inay galaan bogga internetka ee ‘Samsung Drive The Drive’s Drive Drive’, xulo taleefanka hada shaqeynaya oo dooro nooca Samsung Galaxy Waxay rabaan inay isku dayaan muddo 30 maalmood ah. Markaa waa inaad isqortaa oo aad ka tagto cinwaanka iyo macluumaadka kaarka deynta.
Saxiix oo kiro tijaabo Samsung cusub
Runtu waxay tahay haddii aad iska diiwaangeliso websaydhka Samsung hubaal waxaad u noqon doontaa bartilmaameedka ololayaasha suuqgeynta mustaqbalka ee shirkadda South Korea, laakiin weli waa hab dhaqaale oo lagu tijaabiyo qalabka ugu dambeeyay ee aaladaha mobilada ee la tartamayaasha waaweyn ee Apple.
Barnaamijka tijaabada waxaa horey u isticmaali jiray T-Mobile sanadkii la soo dhaafay si loo tijaabiyo iPhone 5s, waxay ku shaqeeysay lacag u dhiganta qiimaha aaladda haddii aan lagu soo celin taariikhda go’an. Soo jeedintan cusub ee Samsung nidaamka ayaa la mid ah, marka waa inaad iska diiwaangelisaa macluumaadka kaarka deynta.
Ha seegin isbarbardhiga u dhexeeya iPhone 6 Plus iyo kuwa cusub ee Galaxy, Halkan.
Waad tijaabin kartaa ka dibna waad soo celin kartaa
Qaar badan oo ka mid ah isticmaaleyaasha iPhone ayaa hubaal ka faa’iideysan doona soo-jeedintan Samsung si ay u tijaabiso aaladda tartameysa, laakiin ka fekereysa inay soo celiso shirkadahana ha beddelin. Si kastaba ha noqotee, Samsung waxay rajeyneysaa inay ka dhaadhiciso in ka badan hal isticmaale iPhone ah si uu u sameeyo isbedelka. Intaa waxaa dheer, si loo fududeeyo howsha, Samsung waxay bixisaa kaarka SIM-ka ee horayba ugu shaqeynayay aaladda, iyo sidoo kale tilmaamo taxane ah oo si buuxda uga faa’iideysan doona muddada tijaabada.
Ololaha Samsung waxaa laga yaabaa inuu aad u socdo, ama aad u xun. Dadka dhaliila ayaa roob ku daadin kara shirkadda South Korea haddii uusan isticmaale iPhone go’aansan inuu beddelo shirkadda. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in madaxda fulinta shirkaddu ay ku qanacsan yihiin in moodooyinka Samsung Galaxy S6 Edge, S6 Edge + iyo Galaxy Note 5 ay soo jiidasho iyo awood ku filan u leeyihiin adeegsadayaasha shirkadda Apple Change.
Soo-jeedinta waxaa kaliya laga heli karaa Mareykanka illaa iyo hadda, laakiin waqti ka dib baaxadda barnaamijka ayaa lagu fidin karaa waddamo kale. Ma isku dayi doontaa inaad sameyso baaritaanka?